I-Magpie- Glamorous Camping Experience - I-Airbnb
I-Magpie- Glamorous Camping Experience
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Stacey
Khipha futhi uphumule. IVALIWE IKAMPENI YEGRIDI. I-insulated efudumele futhi epholile ithokomele ihlolwe ezindaweni zokulala. Diamond mountain Hideaway -Camping ngaphandle komsebenzi. Sikunikeza konke ozokudinga ukuze ubalekele esiphithiphithini sedolobha. Imigodi yomlilo ethokomele, izinkuni zifakiwe. Jabulela umbono omuhle. Ukubuka inkanyezi, ukubuka izinyoni. Kuhlinzekwa izimbiza zamanzi ezingamalitha amabili, ayisikhombisa ukuze uhlale. Ikhishi linakho ozodinga. Awukho ugesi. Futhi AYIKHO Inkokhelo EFIHLEKILE yokuhlanza.
Indawo yethu yokucasha iphezu kwamagquma e-Diamond Mountain. I-driveway Ingamamayela angu-1/2 ubude phezulu egqumeni. Umgwaqo awugandayiwe. Umgwaqo ovumela isimo sezulu. Ama-sprinkle alungile, kodwa ukuthela phansi kakhulu kwenza umgwaqo ushelele. Uma uphezulu lapho futhi kuba nodaka, vele ulinde, umhlabathi woma KAKHULU. I-trampoline yezingane. Ibhola lokubophela. Bonke ubumnandi bokukhempa ngaphandle kokupakisha wonke amagiya. Sikunikeza yona. Ngike ngasho ukuthi kuhlolwe ezindaweni zokulala nemibhede ethokomele enamashidi ahlanzekile. FIKA NGAPHAMBI KOKUMNYAMA UKUZE UJWAYELE.
4.70 · 37 okushiwo abanye
Itholakala kumamayela ayi-12 ukusuka eVernal, UT. Siseduze neNtaba yeDayimane, Isikhumbuzo Sikazwelonke SeDinosaur, ichibi likaMat Warner, iCalder Reservoir, iCrouse Canyon. Itholakala eduze neRed Fleet Reservoir.
Kungenzeka sisebenza kule ndawo. Qiniseka ukuthi uthola umbhalo wolwazi ngaphambi kokuthi ufike. Isevisi yeselula ayitholakali ezansi egqumeni. Isevisi yeselula ifinyeleleka ezivakashini zethu eziningi eziphezulu.